(SAWIRRO) Wasaaradda Waxbarashada Tacliinta sare oo sagootisay Arday deeq waxbarasho ka heshay Dalka Suudan. | puntlandi.com
(SAWIRRO) Wasaaradda Waxbarashada Tacliinta sare oo sagootisay Arday deeq waxbarasho ka heshay Dalka Suudan.
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ayaa sagootisay raacii ugu horeyey sanad dugsiyedkan 2016-2017. Ardayda ayaa garaysa tiro dhan 20 arday oo ka heshay deeq Waxbarasho dalka Suudan khaas ahaan jaamacatu ifriqiya.
Ardaydaan oo ah kuwii sanadkaan dugsiyeedkaan kaalmaha hore ka galay imtixaanka ayaa loo qabtay munaasabad balaaran oo lagu sagootinayay, taasoo ay kasoo qeyb galeen wasiirka mas’uuliyiinta ugu sareysa waxbarashada iyo qunsuliyada muna dama dacwa al islamiya ee Puntland.
Agaasimaha Guud ee waxbarashada Puntland Maxamed C/qaadir Cismaan ayaa sheegay inay guul weyn u tahay tirada intaas le’eg wasaaraddu deeq waxbarashu udirto, wuxuuna sheegay inay ku timid dadaalka wasaaradda waxbarashada.
Agaasimaha Guud ayaa kula dardaarmay ardayda inaysan dayacin fursada qaaliga ah ee la siiyay ilamarkaana ogaadaan inay yihiin safiiro matalaya Puntland.
Xoghayaha ufadhiya Puntland Muna damatu Dacwatu islaam ee dalka suudan shiikh cabduwaduud oo xaflada kasoo qeyb galay ayaa sheegay inay tixgalin gaar ah u hayaan ardayda reer Punland, isagoo ku ammaanay inay yihiin arday ay ka go’an tahay inay waxbarashada inay meel sare ka gaaraan, wuxuuna intaas ku daray inuu xafiiskiisa u fududeeyay dhammaan warqadihii ay ku gali lahaayeen.
Dr Maxamed Cali Faarax Wasiir Ku xigeenka Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare ayaa ardayda usheegay in wasaaradu ay kasoo baxday doorkeedii cadaalad samaynta xilligaana lajoogo xilligii ay kasoo bixi lahaayeen waajibaadkooda, noqdaana safiiro lagu daydo oo Puntland siwanaagsan u bara dadka dalkaasi.
Dhinaca kalena wasiir ku xigeenka ayaa kudheeraaday sida lagu soo xulay ardaydaan wuxuuna sheegay in madaxda wasaaradu aysan wax lug’ ah kulahayn sidii ardayda loosoo xulay laakiin ay kaliya lahaayeen dabagalkeeda.
Wasiirka waxbarashada Puntland Dr, Abshir Yusuuf Ciise ayaa umahad celiyay wadamada Suudaan iyo wadamada deeqaha waxbarasho siiya oo uu sheegay inay mar walba garab istaagan yihiin waxbarashada Puntland.
Wasiirku wuxuu si aad ah ula dardaarmay ardayda tagaysa isagoo u sheegay marna inaysan niyadooda galin tahriib islamarkaana aysan lumin fursada la siiyay ee dahabiga ah.
2017 Ardayda sanadkaan loo dirayo deeqaha waxbarasho ayaa gaaraysa 280 arday , waxayna kala aadayan , Ethoipia, Suudaan, Masar, China Waxaana sidoo kale qeyb ka ah 91 arday oo deeqo waxbarasho looga helay jaamacaddaha kuyaala Dalka Gudaha.